Amanqaku Ekliniki Yasemayo
Iinkampani Ezixuba Amayeza
Iimveliso Zendalo (Umthengi)
Ungangena njani kwiDashboard yeWordPress.com
Xa ubhloga ngeWordPress, uchitha ixesha elininzi kwiDashboard, kulapho wenza khona konke okunomdla, ngasemva kwezehlo okwenzekayo. Indlela ethe ngqo (ekwabizwa ngokuba ukutsiba Isebenza kakuhle xa ufuna ukuqhelana nesixhobo esitsha sesoftware. Ukuza kuthi ga ngoku, landela la manyathelo wokungena kwiWordPress kwaye ujonge kwisibindi seDashboard:
Ngaba naproxen iyafana ne-ibuprofen
Vula isikhangeli sakho sewebhu kwaye uchwetheze idilesi yephepha lokungena kwi-WordPress (okanye i-URL) kwibhokisi yedilesi.
Idilesi yephepha lokungena lijonga into enje (tshintsha loo ntonekuluye.orgokanye a.netnjengoko kufuneka):
http://www.  yourdomain   .com  /wp-login.php
Ukuba ufake iWindowsPress kwifolda yayo, faka igama lefolda kwi-URL yokungena. Ukuba ufake iWindowsPress kwifolda enobuchule enegamaigama, i-URL yokungena iba
http://www.  yourdomain.com  /wordpress/wp-login.php
Chwetheza igama lakho lomsebenzisi kwibhokisi yokubhaliweyo yomsebenzisi kunye negama lokugqitha lakho kwibhokisi yokubhaliweyo yePhasiwedi.
Ukuba uthe ulibale iphasiwedi yakho, i-WordPress uyigubungele. Cofa kwikhonkco elilahlekileyo lePaswedi yakho (ebekwe ngasezantsi kwephepha), faka igama lomsebenzisi kunye nedilesi ye-imeyile, emva koko ucofe iqhosha lokungenisa. I-WordPress iseta kwakhona ipaswedi yakho kunye ne-imeyile iphasiwedi entsha kuwe.
Emva kokucela iphasiwedi, ufumana ii-imeyile ezimbini kwibhlog yakho ye-WordPress. I-imeyile yokuqala inekhonkco onqakraza kulo ukuqinisekisa ukuba ulicelile igama lokugqitha. Emva kokuqinisekisa iinjongo zakho, ufumana i-imeyile yesibini enephasiwedi yakho entsha.
Khetha ibhokisi yokundikhumbula xa ukhumbula ukuba ufuna iWindowsPress ukubeka ikuki kwisikhangeli sakho.
Icookie ixelela iWindowsPress ukuba ikhumbule iziqinisekiso zakho zokungena kwixa elizayo xa uvela. Icookie ebekwe yiWordPress ayinabungozi kwaye igcina ukungena kwakho kwiWindowsPress kwikhompyuter yakho. Ngenxa yecookie, iWindowsPress iyakukhumbula ngexesha elizayo xa undwendwela.
Kuba olu khetho luxelela isikhangeli ukuba sikhumbule ukungena kwakho, sukukhetha uNdikhumbule xa usebenzisa ikhompyutha yakho, ezinye izixhobo ezinje ngethebhulethi okanye iselfowuni, okanye ikhompyuter kwiivenkile ezikwi-Intanethi.
ubunzima bomzimba kunye ne-gabapentin
Phawula: Ngaphambi kokuba usete olu khetho, qiniseka ukuba isikhangeli sakho siqwalaselwe ukuvumela ii-cookies. (Ukuba awuqinisekanga ukuba ungayenza njani le nto, jonga uxwebhu loncedo lwebrawuza oyisebenzisayo.)
Cofa iqhosha lokungena.
Emva kokuba ungene kwi-WordPress, ubona iphepha leDashboard.
Uyisebenzisa kanjani i-skype kwi-Android
ukunyanga njani ukutshiswa kwecuba
Umahluko phakathi kwe-motrin kunye ne-ibuprofen
indlela yokufaka iikholamu kwi-excel
icebo b inyathelo elinye lesigqebhezana
ipilisi emhlophe 44 175
ukuba ngumphicothi zincwadi njani